စပ်မိစပ်ရာ Covid – 19 ရေးရာ - Hello Sayarwon
စပ်မိစပ်ရာ Covid – 19 ရေးရာ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (Covid – 19) က မျိုးဗီဇ ပြောင်းလဲမှုနဲ့အတူ ကိုဗစ်တွေက တစ်လှိုင်းပြီး တစ်လှိုင်းဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ ကိုဗစ် တစ်လှိုင်းပြီး တစ်လှိုင်းဖြစ်ပေါ်မှုနဲ့အတူ စာဖတ်သူတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ စိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့အတူ သိချင်စိတ်တွေလည်း များနေမယ် ထင်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခေါက်တော့ ကိုဗစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စာဖတ်သူတွေ ဇဝေဇဝါဖြစ်နေနိုင်တဲ့ အကြောင်းလေးတွေကို ပြောပြပေးသွား ပါမယ်။
ကိုဗစ်က ရေကနေတဆင့် ကူးနိုင်လား………
အခုထိတော့ ကိုဗစ်က သောက်သုံးရေတွေ၊ ချိုးရေနဲ့ အခြားသော ရေအရင်းအမြစ်တွေမှာ ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သက်သေ မတွေ့ရသေးပါဘူး။
သောက်သုံးရေတွေကို သန့်ရှင်းအောင် ဂရုစိုက်တာ၊ ကလိုရင်း ခတ်တာလိုမျိုး လုပ်တာကတော့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်မှာပါ။
ကိုဗစ်က အစားအစာတွေကနေတဆင့်ရော ကူးနိုင်လား………
အခုထိတော့ အစားအစာတွေကနေ ကိုဗစ် ကူးစက်တယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထား မတွေ့ရသေးပါဘူး။ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ကလည်း အခြား ဗိုင်းရပ်စ်တွေ နည်းတူ အစားအစာ ချက်ပြုတ်တဲ့ အပူချိန်မှာ မရှင်သန်နိုင်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် အစားအစာတွေကို ချက်တဲ့အခါ သေချာ ကျက်အောင် ချက်ပြုတ်ပါ။
ကိုဗစ်က ဘယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းတွေကို အထိခိုက်စေနိုင်ဆုံးလဲ………..
COVID-19 ကြောင့် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိခိုက်ရတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းက အဆုတ်ပါ။ အကြောင်းကတော့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်က အသက်ရှူလမ်းကြောင်း အထက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း နဲ့ sinus တို့ကနေတဆင့် အသက်ရှူလမ်ကြောင်း အောက်ပိုင်း လေပြွန် နဲ့ အဆုတ်ဆီကို အဓိက ဝင်ရောက်တာကြောင့်ပါ။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်က ဘယ်လို အနေအထားမှာ ရှင်သန်ဖို့ ခက်ခဲလဲ…………..
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်က နေရောင်မှာပါတဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နဲ့ ထိတွေ့တဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံး သေဆုံးပါတယ်။ သာမန် အခန်း အပူချိန်နဲ့ သာမန် အခန်း အပူချိန်အောက်၊ စိုထိုင်းဆ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအောက်မှာ အချိန်ကြာမြင့်စွာ ရှင်သန်နိုင်ပါတယ်။
ကိုဗစ်ခံစားရနိုင်ခြေ မြင့်သူတွေက ဘယ်သူတွေ ဖြစ်မလဲ………..
သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၊ နှလုံးသွေးကြောရောဂါ၊ ဆီးချို၊ နာတာရှည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါ၊ ကင်ဆာရောဂါ ခံစားနေရသူတွေ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ နဲ့ ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူထားရသူတွေမှာ ကိုဗစ် ကူးစက်ခံရနိုင်ခြေ ပိုများပါတယ်။
ပူနွေးတဲ့ ရာသီဥတုမှာရော ကိုဗစ် ကူးစက်နိုင်လား…………..
အခုချိန်ထိ လေ့လာထားမှု ရလဒ်တွေအရကတော့ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်က နေရာတိုင်းမှာ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ပူနွေးစိုစွတ်တဲ့ ရာသီဥတုမှာရော အေးမြခြောက်သွေ့တဲ့ ရာသီဥတုမှာပါ ရှင်သန်နိုင်ပါတယ်။
ကိုဗစ်ကို အကောင်းဆုံး ကာကွယ်နည်းကတော့ မကြာခဏ လက်ဆေးတာ၊ ပါးစပ်နဲ့ နှာခေါင်းစည်း တပ်ဆင်တာ၊ လူစုလူဝေးတွေကို ရှောင်ရှားတာပါပဲ။
ကိုဗစ် ကူးစက်ခံရတဲ့အခါ လူကြီးတွေက ဘာကြောင့် ပိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရတာလဲ…………….
ကလေး နဲ့ လူကြီးတွေရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ် တုံ့ပြန်ပုံချင်း ကွာခြားနေတာကလည်း ကလေးတွေမှာ ကိုဗစ်လက္ခဏာ မပြင်းထန်ရခြင်းရဲ့ အချက်တစ်ခုပါ။ ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ် ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ဝင်ရောက်တဲ့အခါ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေရဲ့ ကိုယ်ခံအားက အလွန်အကျွံ တုံ့ပြန်တာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ထိခိုက်မှုတွေက ပိုများတာပါ။
လူကြီးတွေရဲ့ ကိုယ်ခံအားက ကလေးတွေလို မဟုတ်ဘဲ အပြည့်အဝ ဖွံ့ဖြိုးပြီးတာရယ် ဗိုင်းရပ်စ်ကို အလွန်အကျွံ တုံ့ပြန်တာရယ်ကြောင့် လူကြီးတွေမှာ ကိုဗစ် ကူးစက်ခံရတဲ့အခါ ပိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရတာပါ။
ဘယ်လို အခြေအနေက ကိုဗစ် ကူးစက်ခံရနိုင်ခြေ မြင့်သလဲ………..
ဒီအခြေအနေ (၃) ရပ်က ကိုဗစ် ကူးစက်ခံရနိုင်ခြေများပါတယ်။
• လူစုလူဝေး၊ လူထူထပ်တာ
• နီးနီးကပ်ကပ် ထိတွေ့ဆက်ဆံတာ
• လေဝင်လေထွက် မကောင်းတဲ့ အလုံပိတ်နေရာတွေကို သွားလာတာတွေက ကိုဗစ် ကူးစက်ခံရနိုင်ခြေ ပိုများပါတယ်။
Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public: Mythbusters https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters#:~:text=People%20of%20all%20ages%20can,ill%20with%20the%20virus Accessed Date5August 2021
https://www.who.int/news/item/23-03-2020-pass-the-message-five-steps-to-kicking-out-coronavirus#:~:text=Hands%20touch%20too%20many%20surfaces,making%20you%20feel%20unwell. Accessed Date5August 2021